Dagaal dhexmaray Soomaali & Booranta Kenya oo sababay dhimasho, Dhaawac & Barakac. – Banaadir Times
Dagaal dhexmaray Soomaali & Booranta Kenya oo sababay dhimasho, Dhaawac & Barakac.
By banaadir 10th January 2021 80 No comment
Dagaal dhexmaray Soomaalida & Booranta ku dhaqan deegaannada u dhaw Wajeer & Gaarisa oo deegaanka u ah Soomaalida dhulka Soomaalida ee Kenya ay maamusho ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay 7-ruux ayaa ku dhimatay isku dhaca labada dhinac waxaana ku dhaawacmay tiro sida laga soo xigtay dadka deegaanka oo qaarkood warbaahinta la wadaagay macluumaadka khasaaraha dagaalkaas.
Mas’uuliyiinta Gaarisa & Wajeer ayaa Dowladda Kenya ka dalbaday in ay gacmaha qabato Booranta oo duulaan ku ah dhulka Soomaalida ee NFS, isla markaana ay bartilmaameedsaneyso dad rayid ah oo deegaanka ah.
Xiisadda labada dhinac ayaa wali taagan, waxaana dadka ugu badan ee la weeraray ee Soomaalida ah la sheegay in ay yihiin Xoolo dhaqato, dhul daaqsimeed ay leeyihiin laga hor istaagay sida ay ku doodeen.
Deegaanno dhowr ah waxaa isaga baxay dadkii ku sugnaa, kadib markii ay ka cabsadeen in weerar lagu miro deegaankooda lagu dhibaateeyo, maadaama Dowladda ay ka gaabisay, mas’uuliyiinta metaleysana aysan awoodin wax ka qabashada.
Guddigga KMG ah ee Rugta Ganacsiga & Warshadaha oo War soo saaray
C/Raxmaan Cabdi Shakuur oo Dhabar jab weyn ku tilmaamay Magacaabista Saadaq John